Scarlet Witch မော်ကွန်းတိုက်များ Brick Fanatics
LEGO လုပ်ပါ Marvel minifigures တွင်eတစ်ခုပါ ၀ င်သည်xtra ဇာတ်ကောင်လား
31 / 07 / 2021 31 / 07 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 370 Views စာ0မှတ်ချက် 71031, 71031 Marvel စတူဒီယို, ပုရွက်ဆိတ်-Man, Captain America, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney+, Lego, lego coll ပါ, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, LEGO စုဆောင်း Minifigures 71031 Marvel စတူဒီယို, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego Spider-Man, Marvel, ပတေရုသက Parker, Scarlet စုန်းမ, စကော့လန်း, Scarlet စုန်းမ, နောကျတှဲရထား, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
အဆိုပါ Lego Marvel Collectible Minifigures များသည်စူပါဟီးရိုးရုပ်ရှင်လောကစကြဝာမှပရိသတ်များအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရွေးချယ်မှုများရှိသည်
09 / 07 / 2021 09 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 961 Views စာ0မှတ်ချက် 76178 နေ့စဉ် Bugle, Avengers, Bucky ကျီများ, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဂarter, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Gamora, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego ကောလာဟလများ, Lego Spider-Man, Loki, Marvel, Peter Quill, ကောလာဟလာ, Scarlet စုန်းမ, Spider-Man, ကြယ်စင်သခင်, Sylvie, Thanos, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, အဆိုပါ LEGO Group, Throg, ဗျာဒိတ်ရူပါရုံ, Wanda, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, အဖြူရောင်အမြင်
13 / 06 / 2021 14 / 06 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 287 Views စာ0မှတ်ချက် 76031 အဆိုပါ Hulk Buster Smash, 76051 စူပါသူရဲကောင်းလေဆိပ်တိုက်ပွဲ, 76178 နေ့စဉ် Bugle, 76192 Avengers: နောက်ဆုံးစစ်ပွဲ, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, Avengers: The Infinity Saga, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, Lego, Lego Avengers Endgame, Lego မှ marvel, Marvel, အသေးစား, သေးသေးလေး, Scarlet စုန်းမ, အဆိုပါ Infinity Saga, ဝမ် Maximoff, WandaVision, YouTube ကို
24 / 05 / 2021 25 / 05 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 429 Views စာ0မှတ်ချက် 76192 Avengers: နောက်ဆုံးစစ်ပွဲ, Avangers: Endgame, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, Avengers: The Infinity Saga, အုတ်ဖို, Captain America, ကပ္ပတိန် Marvel, Lego, Lego Avengers Endgame, Lego မှ marvel, Marvel, ဒုံးပျံ raccoon, Scarlet စုန်းမ, Thanos, အဆိုပါ Infinity Saga, Thor
19 / 05 / 2021 19 / 05 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 1081 Views စာ0မှတ်ချက် 76186 အနက်ရောင် Panther နဂါး Flyer, 76189 Captain America နှင့် Hydra Face-Off, ၇၆၁၉၀ Iron Man: Iron Monger Mayhem, ၇၆၁၉၁ Infinity Gauntlet, 76192 Avengers: နောက်ဆုံးစစ်ပွဲ, 76193 အဆိုပါ Benatar, 76193 အဆိုပါအုပ်ထိန်းသူများ '' သင်္ဘော, ပုရွက်ဆိတ်-Man, Avengers, Avengers: Ultron ၏ခေတ်, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, Black က Panther, Captain America, Groot, သံမဏိလူသား, Lego, Lego မှ marvel, mantissa, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, MCU, ဒုံးပျံ raccoon, Scarlet စုန်းမ, Shuri, စတား-သခင်ဘုရား, နွေရာသီ, နွေရာသီ 2021, Thanos, Thor
14 / 05 / 2021 14 / 05 / 2021 ခရစ် Wharfe 894 Views စာ0မှတ်ချက် 76107 Thanos Ultimate စစ်တိုက်, 76186 အနက်ရောင် Panther နဂါး Flyer, 76189 Captain America နှင့် Hydra Face-Off, ၇၆၁၉၀ Iron Man: Iron Monger Mayhem, ၇၆၁၉၁ Infinity Gauntlet, 76192 Avengers: နောက်ဆုံးစစ်ပွဲ, 76193 အဆိုပါအုပ်ထိန်းသူများ '' သင်္ဘော, အမေဇုံ, ပုရွက်ဆိတ်-Man, Avengers: The Infinity Saga, Black က Panther, Captain America, Groot, Hydra အေးဂျင့်, Infinity Saga, သံမဏိလူသား, Lego, Lego မှ marvel, mantissa, Marvel, သြဗဒိသည်စတန်, ငရုတ်ကောင်း, ဒုံးပျံ raccoon, Scarlet စုန်းမ, Shuri, စတား-သခင်ဘုရား, Thanos, အဆိုပါ Infinity Saga
23 / 04 / 2021 23 / 04 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 965 Views စာ0မှတ်ချက် Bucky ကျီများ, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဗြိတိန်, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney, Disney+, Gamora, Lady Loki, Lego, Lego မှ marvel, Lego ကောလာဟလများ, Loki, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, MCU, မော်နီကာရက်ဘို, ကောလာဟလာ, ကောလာဟလများ, ဆမ် Wilson, Scarlet စုန်းမ, Spider-Man, စတား-သခင်ဘုရား, စွန်ငှက်, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, အဆိုပါဆောင်းရာသီ Soldier, Throg, ဗျာဒိတ်ရူပါရုံ, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, အဖြူရောင်အမြင်, ဝှိုက်ဖြူ, ဆောင်းရာသီ Soldier, ဖုတ်ကောင်, ဖုတ်ကောင်
20 / 04 / 2021 20 / 04 / 2021 ခရစ် Wharfe 1225 Views စာ0မှတ်ချက် Bucky ကျီများ, Captain America, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Gamora, Instagram ကို, Lady Loki, Lego, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego ကောလာဟလများ, Loki, Marvel, သေးသေးလေး, မော်နီကာရက်ဘို, ကောလာဟလာ, ဆမ် Wilson, Scarlet စုန်းမ, Spider-Man, စတား-သခင်ဘုရား, စတိဗ်ရော်ဂျာ, T'Challa, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, Throg, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, အဖြူရောင်အမြင်
ထိုနေ့၏အုတ်ပုံ: Happy Birthday Elizabeth Olsen
16 / 02 / 2021 15 / 02 / 2021 Sebastian 480 Views စာ0မှတ်ချက် Avengers, အုတ်ပုံ, အဆိုပါနေ့၏အုတ် Pic, Marvel, MCU, Scarlet စုန်းမ, ဗျာဒိတ်ရူပါရုံ, ဝမ် Maximoff
ဒီနေ့အသက် ၃၂ ​​နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့မင်းသမီးအဲလစ်ဇဘက်အိုလန် (Wanda Maximoff) လို့လည်းခေါ်ကြတဲ့ Scarlet Witch ကိုမွေးနေ့မှာပျော်ရွှင်စွာမွေးဖွားပါတယ်။ မင်းလား